SCP-087 - Jaranjarada subtitles September 26, 2020
SCP-087 - Jaranjarada subtitles
Waxa ugu horreeyay ee ku qasbay aasaaska SCP-087 wuxuu ahaa warka oo ka mid ah dadka badan ee Jaamacadda ka maqan. Waxaa jiray aragti qaar ka mid ah wixii ka dambeeyay iyaga, laakiin Wakiiladu way ka shakiyeen waayitaankaasi wuxuu dhaafi lahaa mala-awaalka rayidka. Qof kastaa wuu ogaa in qof kasta oo sidaa ku lumay ay ahayd markii ugu dambeysay ee lagu arko dhismaha maamulka ee dhismaha jaamacadda, oo kaliya la waayo waxayna dhacday markii wiishku shaqeyn waayey. Jaamacadaha waxaa durba laga buuxiyey wakiilo ka socda aasaaska, taas oo carqalad ku abuureysa maamulka dhismaha, iyo jawiga la odorosay ee SCP-087. Cid kale ma geli karto halkaas, waxaanan rajaynayaa in waxa gudaha ku jira aanu soo bixi doonin. Mid ka mid ah saynisyahannada aasaasiga ah ayaa u yimid inuu la tashado baaritaanka. Maxaa sababi lahaa in la waayo dhammaan ardaydaas? Wareysiyada hordhaca ah ee dhaqtarka uu laqaatay shaqaalihii kasoo shaqeeyay dhismaha jaamacada Waxay keentay faahfaahino xiiso leh: Dhawaqyo kaladuwan, sida garaacid iyo xitaa dhawaq daloolin oo daciifa duufsan, waxaa laga maqlayay albaabka u horseeday jaranjarada aan la isticmaalin ee Hall 3B. Shaqaalaha dhismaha ma aysan haysan sabab ay u fuulaan jaranjaradaas iyagoo weli maskaxda ku haya intee in le’eg ayaa dareen qariib ah oo degganaansho la’aan ah laga soo sheegay, in kasta oo uu albaabka agtiisa taagnaa. Sababta kaliya ee qofkasta u kori lahaa jaranjarada ayaa ah. Ku xadgudubka wiishka Xilligaas, dhakhtarku wax walba hal meel ayuu dhigay. Shaqaaluhu way weyddiiyeen sababta oo ah xusuustooda ayaa laga tirtiray mahadnaq Amnestic / kiimikooyin gaar ah Aasaasku u adeegsaday awood uu ku masaxo xusuusta aadanaha. Mu'asasada ayaa u isticmaashay kaliya shaqaalaha ama dadka rayidka ah ee xaqiijiyay xiriirka SCP, dhakhtarkuna wuu ogaa inay gacantooda ku hayaan Jaranjarada. Jaranjarada waxbaa laga baqi jiray, oo waxay ahayd aasaaska SCP Soo ogow wixii ka horreeyay ee sababay in qof walba la waayo. Tani waa sheekada SCP-087 oo sidoo kale loo yaqaan Jaranjarada Infinite iyo Saddex waddooyinka halaagsani hoos ugu mool dheer. Dhakhtarku wuxuu aad uga jeclaa inuu bilaabo sahaminta jaranjarada iyo cillado xumadiisa Guryaha. Si kastaba ha noqotee, kama dhex geli doontid cilmi-baarayaasha waaweyn ee aasaaska iyada oo aan geesinimo lahayn, iyo in yar oo waalan. Sidii caadiga ahayd, markii wareega lagu ilaaliyo jaranjarada, dhakhtar wanaagsan ayaa weydiiyey xulashada maadooyinka imtixaanka Class D. Kuwa aan aqoon, Class D waa hab edeb leh oo aasaaska loo yiraahdo "tijaabo Doofaarrada Guinea. " Dhakhtarka ayaa loo diray sadex maxbuus oo ka tirsan Class D si ay u baaraan SCP-087 Marka hore. D-8432. wuxuu jiray 43 sano, sida ku cad dukumiinti rasmi ah oo ku saabsan dhacdada nin dherer iyo muuqaal celcelis ahaan iyo muuqaal caadi ah oo nafsiyeed leh. Ninkani wuxuu u shaqeyn jiray aasaaska xafiis rasmi ah, laakiin badiyaa wuu helay nabaad-guurka heerka D ah oo ay sabab u tahay qaladka halista ah ee SCP-682 u horseeday dhimashada wakiilo dhowr ah. Waxay umuuqataa in hada la joogo. Dhaqtarka ayaa u sharaxay tilmaamaha uu siiyay: Baadh jaranjarada, hel macluumaad badan intii suurtogal ah, naga caawi inaan si sax ah u ogaanno waxa aan ka qabaneyno halkan. Haddii aad soo noqotid adigoo nool, xitaa waxay kuu noqon kartaa dallacsiin adiga. Iyo ballantaas, D-8432 waxay heshay laambad daadad ah oo 75-watt ah oo leh batteri muddo 24 saacadood ah, sameecadaha dhagaha lagu duubo iyo kaamirada gacanta lagu duubo oo leh tabinta tooska ah, iyo sameecadaha dhagaha ee lagula xiriiro Dr.Bright D-8432 waxaa lagu tuuray albaabka marinka 3B, jaranjarada. Sida ku xusan feylasha aan kala sooc lahayn, Aasaasku wuxuu sharxayaa jaranjarada, SCP-087 waa jaranjarada unlit Jaranjarada ayaa ku degaysa xagal 38 darajo ah 13 tallaabo ka hor intaanay gaarin sagxadda wareega qiyaastii 3 mitir dhexroor. Jihada uu ku abtirsado wuxuu ku wareegaa 180 digrii madal kasta. Dabeecadda SCP-087 waxay xaddideysaa muuqaalka 1.5 dabaq. Laakiin maskaxda D-8432, "ma shidna" runti uma muuqan eray sax ah. Waxaa loo doortay "nuugista mugdiga" In kasta oo laambad awood leh oo 75-watt ah, D-8432 waxay awood u yeelatay inay qayb uun iftiimiso madal uu ku taagnaa oo uu ku guulaystay inuu iftiimiyo oo kaliya 9 talaabo oo ah 13 tallaabo oo loo maro barnaamijka xiga. Markuu D-8432 daawaday sida yar ee laambaddu u ifayso, waxaa la faray inuu iftiimo albaabka marinka 3B Markii uu ka ifayay hoolka, waxay umuuqatay inuu aad uga iftiimay SCP-087. Horeba, bilowgii waxqabadka aan wanaagsaneyn wuxuu ahaa mid iska cad: Meel kasta oo kale mugdi ayaa ka jira kaliya maqnaanshaha iftiinka. SCP-087, mugdigu wuxuu cunaa iftiinka. Waxay umuuqatay, arrin madow oo noolaan karta qadar cayiman iftiinka halka inta soo hartay uun ma soo muuqan doonaan. D-8432 ayaa liqay si adag burooyinka cunahiisa. Albaabka marinka 3B ayaa laga xiray gadaashiisa waxaana laga codsaday inuu hoos u dhaco. Badbaadadu waxay muujisay in dallacsiintu aysan u badnayn, laakiin maahan inuu dookh helay. Haddii uu isku dayo inuu ka baxsado SCP-087 ka hor inta aan la oggolaan, waxaa lagu toogan lahaa isla goobta wakiilada SCP Foundation. Markaa wuxuu raacay tilmaamaha dhakhtar meeqaam sare ah wuxuuna bilaabay inuu soo dego madal kale. Waxba kama jirin waxyaabaha jireed ee jaranjarada laftoodu wax aan caadi ahayn - saldhigga iyo derbiyada waxay ahaayeen kuwo cad, oo la taaban karo, oo leh bir bir ah. Hal shay oo umuuqday midka kaliya ee ilaa hada ahaa astaamaha cajiibka ah ee iftiinka. Taasi waxay ahayd ilaa uu ka gaadhay barxaddii labaad oo uu maqlay qaylo jilicsan Ilmaha ooyaya .. Waxay ahayd weerar argagax leh, ama xitaa xanuun xagga hoose ah. Wuxuu weydiiyay sababta uu ujoogsaday, wuxuuna sharaxay dhawaqa buuq uu maqlay. Waxay u egtahay inay ka soo dhaceyso jaranjarada, laga yaabee inay 200 mitir ka hooseyso. Wuxuu garan karaa oo keliya ereyada "fadlan," "caawimaad," iyo "hoos halkan." mugdi. Laakiin kooxda waxba kama ay maqal jaranjarada dibedda, sidaa darteed wuxuu ka codsaday inay soo degaan siiyey. Madal kale oo hoos u dhacday iyaguna waxay bilaabeen inay maqlaan iyaguna, iyagoo baqaya oohinta cunug "Fadlan," "caawin," iyo "hoos halkan." D-8432 waxaa la amray in la sii wado oo la joojiyo oo keliya markay ogaato isbeddelada ku dhaca muuqaalka muuqaalka ama dhawaqa uu maqlay. D-8432, isaga oo og in noloshiisu khadka ku jirto, waa inuu sii wadaa oo uu labaatan jirsado dabaqyada ka hooseeya jaranjarada ka hor intaanu istaagin inuu dhaho ma gaadhin ilmaha ugu dhow dhammaan. Weli waxay ka dhawaajisay meel fog, sidii markii ugu horreysay ee uu maqlay. Waxaa loo sheegay in indha indheyntiisii ​​la duubay, laguna qasbay inuu horay u socdo. Nus saac gudahood, D-8432 wuxuu gaadhay 50 dabaq, welina ma jiro hoose. Mugga oohinta ilmaha ayaa sidiisii ​​ahaatay markasta sidii laga soo raray D-8432 isla xawaare la mid ah kii soo degay. Xilligan, D-8432 wuxuu ku dhawaaqay inuu dareemay amni darro. Dhaqtarka ayaa sheegay inay tahay wax dabiici ah marka loo eego duruufaha jira Wuxuu arkay wax yar markasta, sida fiidiyoowga tooska ah, iyo wax ku saabsan dabeecada runta ah ee jaranjarooyinka oo aan wali gaarin dhawaqa oohin, waxay ahayd mid aan la inkiri karin cabsi. Laakiin arrimihii runtii waxay noqdeen kuwii ugu xumaa. Markii ay D-8432 tallaabo hore u qaadday tallaabada xigta, wey qabowday. Hoosta waxaa ku yaal madasha wax aan weli iftiimin Guluubka nalka 75 watt. Waxay ahayd weji. Qaabka iyo cabirka aadanaha ee yaabka leh, laakiin wuxuu lahaa xoogaa kala duwanaansho cabsi badan, maqaarka cawl, kaasoo aan lahayn afka, dulalka sanka iyo ardayda. Iyo si cad, D-8432 wuxuu dareemay inuu isha ku hayo sheygan. Wuu dhaqaaqi kari waayey, waxaa ku xayirmay indha-indheynta waxyaabahaas. Tan dhexdeeda, wajiga isla markiiba horay ayuu u jiiday wuxuuna qiyaastii 1 tallaabo u jiraa wajiga D-8432 indhihiisu waxay fiirinayaan indhihiisa. D-8432 wuu qayliyay wuuna orday, wuxuu hoos udhacay 50 dabaq 18 daqiiqo oo layaableh, ka hor intaanu isku tuurin marinka 3B. Halkaasuu ku burburay cabsi iyo daal badan wixii uu arkay. Kadib markii la baaray duritaanka wajiga qalaad, waxaa loogu talagalay inuu noqdo SCP-087-1 Xiiso badan, waa waqtigii tijaabo labaad. Dhakhtarku wuxuu u baahday inuu waxbadan ogaado. Mawduuca labaad ee imtixaanka wuxuu ahaa D-9035, waa nin 28 jir ah oo taariikh ku leh nacayb xad dhaaf ah xagga haweenka. Wuxuu helay waxyaabo la mid ah maadadii hore, wuu xoog badan yahay markan 100 watt nalka Waxa kale oo uu helay 100 nal yar oo laydh ah oo leh dhabarka dheg dheg leh oo batari ku xidhan yahay 3 toddobaad, iyada oo taasi ay ahayd inay si joogto ah u iftiimiyaan SCP-087 Nasiib darrose, awoodda dheeriga ah ee guluubkaagu weli wax dheeraad ah kama sii daadin karto tallaabada sagaalaad. SCP-087 ma ogolaaneyso. Isagu wax fikrad ah kama uusan hayn argagaxa ay fiirinayaan, wuxuu aaday dhakhtarka amar, oo waxay bilaabeen inay ku dhejiyaan LED-yada gidaarka goob kasta. Laydhka wuxuu had iyo jeer iftiimiyaa kaliya sagxadda, laakiin nalka ma ifayo sida 1 tallaabo on xisbi kasta. Jaranjarada qudhoodu waxay ku sii nagaan doonaan gudcurka weligiis ah Dabaqa labaad kadib, D-9035 wuxuu soo sheegayaa isla qayladii markii uu maqlay D-8432 oo uusan nasan. Sidii hore oo kale, markii ay soo dhacdo D-9035, dhawaqa jabaqku ma kordho, sida haddii uu tallaabo ka qaaday, maxaa isha ciilku ka qaadi lahaa oo hoos u sii haynaysaa 200 mitir ka hooseysa. Hase yeeshe, waxaa la baray inuu soo dego oo uu dhigo Laydhka markii uu curyaannimo la'aa koray. Markuu dhaafo dabaqa 51-aad, wuxuu ogaadaa waxyeellada darbiga iyo jaranjarooyinka Waxay u egtahay xoog xad-dhaaf ah oo ku garaacaya qaybo. Markii uu ka soo degay jaranjarooyinka jajaban, wuxuu dareemay cabsidiisa, welwelkiisa, iyo paranoia inuu korayo. Dhaqtarku wuxuu ogaaday xaqiiqda ah in SCP-087 ay sida muuqata walaac ku abuurayso dadka deggan iyo argagax, kahor intaan lala kulmin SCP-087-1 Markii ay D-9035 gaartey dabaqa 89aad - 350 mitir buuxa oo ka hooseeya barxaddii hore - way joogsatay raadkiisa, oo wuxuu arkay shay ka dhudhunsanaaya barxadda hoose. Isla, weji cirro leh, oo leh indho cad oo dhintay. Waxaa lagu dhiirigaliyay inuu isdajiyo oo wuxuu isku dayay inuu helo talaal wajiga kafiican, laakiin wuu bilaabay dushiisa iyo D-9035 wuxuu u orday naftiisa. Jaranjarada wuxuu ku fuulay xawaare aan caadi aheyn, xitaa isagoo daal la daala dhacaya oo aan dhaqdhaqaaq lahayn 14 daqiiqo kalabadh. Markii D-9035 ay heshay awood ay ku kacdo oo ay ugu laabato Corridor 3B waxayna ku dhacday xaalad catatonic ah. Ilaa maanta, isagu wax kama falceliyo, wax jawaab ah kama bixin oo wuxuu fiirinayaa oo keliya masaafada leh hadal xun. Waxay u egtahay sidii in marinku wali yaalo. Dhakhtarku wuxuu rabay inuu sameeyo hal baaritaan oo dheeri ah kahor inta uusan amrin SCP-087 inuu xirnaado weligiis iftiin, oo taasuna waxay ahayd midda ugu cabsida badan. Mawduuca ugu dambeeya wuxuu ahaa D-9884, haweeney 23 jir ah oo niyadjab joogto ah qabta adeegsiga awood xad dhaaf ah. Dhakhtarku wuxuu rajeeyay in D-D-9884 uu u safri doono sida ugu qotada dheer, markaa wuu siiyay. ku kaydso boorsada 3.75 litir oo biyo ah, 15 baararka nafaqada, iyo 1 kulul buste. Dhanka Aasaaska, waxay ahayd wado fog. Laakiin midkoodna ma garaneynin sida ay u qumman yihiin. Markuu D-9884 soo galay SCP-087, dhammaan nalalka sahankii hore waa la waayey. Si kastaba ha noqotee, waxaa la faray inuu gaaro moolka. Waxay maqashay oohinta ilmo dahsoon - hadday ilmo tahayba - iyo waxaa markale lagu amray inay gasho moolka hoose. Dabaqa 496-aad, waxay umuuqatay in D-9884 uu galay argagax dilaa ah mar kale ayaa lagu amray inay si qoto dheer u sii socoto. Waqti kasta iyo kadib, wuxuu rajeynayey inuu si dhow u eego wejiga SCP-087-1. Iyo markii D-9884 uu ugu dambeyntii burburay oo uu fuulay jaranjarada, wuu sameeyay. Wejigeeda ayaa u muuqday, laakiin markan dhererkeeda ayay ka dambaysay iyada oo toos u eegaysa kamaradaha indhaha madhan, ka yaabisay xitaa halyeeyga ka sarraysa. Wejiga soo muuqday wuxuu sababay D-9884 inuu argagaxo, oo baxsado, laakiin halkii aad jaranjarada ka bixi lahayd jaranjarada si ay u badbaado, waxay hoos ugu sii dhaadhacday jaranjarada iyada oo isku dayaysa inay baxsato. Qoto dheer oo qoto dheer, oo qoto dheer ilaa fiidiyowga laga joojiyay. D-9884 dib uma soo noqon. Imtixaanada kadib, SCP waxaa lagu qiimeeyay Euclid - malaha waxay ahayd khatar ah, laakiin way sahlanayd in la tago. Albaabka marinka 3B waxaa lagu beddelay albaab ka sameysan bir xoojin leh koronto farsamo. Waa la qariyey, sida qolka dayactirka oo la mid ah dhismaha intiisa kale. Qufulku ma sii deyn doono ilaa volt-ka la xoojinayo isla markaana aan isla waqtiga la qaadayn furaha wuxuu u rogay dhinaca woqooyi. Ka dib gudaha albaabka waxaa lagu dhejiyay dhowr inji oo faashad xumbada warshadaha ah, shaqaalaha dhismaha waligood ma aysan soo sheegin wax dhawaaq ah oo qariib ah. Sida kuwa ku lumay dabaqyada leexashada leh ee aan dhammaadka lahayn iyo barxadda SCP 087 waligeen ma ogaan karno. Laakiin waxaan kaliya u qaadan karaa inaysan fiicnaan doonin.
SCP-087 - Jaranjarada
<text sub="clublinks" start="0.14" dur="4.77"> Waxa ugu horreeyay ee ku qasbay aasaaska SCP-087 wuxuu ahaa warka </text>
<text sub="clublinks" start="4.91" dur="2.9"> oo ka mid ah dadka badan ee Jaamacadda ka maqan. </text>
<text sub="clublinks" start="7.81" dur="4.24"> Waxaa jiray aragti qaar ka mid ah wixii ka dambeeyay iyaga, laakiin Wakiiladu way ka shakiyeen </text>
<text sub="clublinks" start="12.05" dur="5.09"> waayitaankaasi wuxuu dhaafi lahaa mala-awaalka rayidka. </text>
<text sub="clublinks" start="17.14" dur="4.8"> Qof kastaa wuu ogaa in qof kasta oo sidaa ku lumay ay ahayd markii ugu dambeysay ee lagu arko </text>
<text sub="clublinks" start="21.94" dur="4.66"> dhismaha maamulka ee dhismaha jaamacadda, oo kaliya la waayo </text>
<text sub="clublinks" start="26.6" dur="2.519"> waxayna dhacday markii wiishku shaqeyn waayey. </text>
<text sub="clublinks" start="29.119" dur="4.321"> Jaamacadaha waxaa durba laga buuxiyey wakiilo ka socda aasaaska, taas oo carqalad ku abuureysa maamulka </text>
<text sub="clublinks" start="33.44" dur="4.73"> dhismaha, iyo jawiga la odorosay ee SCP-087. </text>
<text sub="clublinks" start="38.17" dur="4.2"> Cid kale ma geli karto halkaas, waxaanan rajaynayaa in waxa gudaha ku jira aanu soo bixi doonin. </text>
<text sub="clublinks" start="42.37" dur="5.31"> Mid ka mid ah saynisyahannada aasaasiga ah ayaa u yimid inuu la tashado baaritaanka. </text>
<text sub="clublinks" start="47.68" dur="2.35"> Maxaa sababi lahaa in la waayo dhammaan ardaydaas? </text>
<text sub="clublinks" start="50.03" dur="3.89"> Wareysiyada hordhaca ah ee dhaqtarka uu laqaatay shaqaalihii kasoo shaqeeyay dhismaha jaamacada </text>
<text sub="clublinks" start="53.92" dur="5.28"> Waxay keentay faahfaahino xiiso leh: Dhawaqyo kaladuwan, sida garaacid iyo xitaa dhawaq daloolin oo daciifa </text>
<text sub="clublinks" start="59.24" dur="5.99"> duufsan, waxaa laga maqlayay albaabka u horseeday jaranjarada aan la isticmaalin ee Hall 3B. </text>
<text sub="clublinks" start="65.23" dur="3.98"> Shaqaalaha dhismaha ma aysan haysan sabab ay u fuulaan jaranjaradaas iyagoo weli maskaxda ku haya </text>
<text sub="clublinks" start="69.21" dur="4.99"> intee in le’eg ayaa dareen qariib ah oo degganaansho la’aan ah laga soo sheegay, in kasta oo uu albaabka agtiisa taagnaa. </text>
<text sub="clublinks" start="74.2" dur="5.699"> Sababta kaliya ee qofkasta u kori lahaa jaranjarada ayaa ah. Ku xadgudubka wiishka </text>
<text sub="clublinks" start="79.899" dur="2.741"> Xilligaas, dhakhtarku wax walba hal meel ayuu dhigay. </text>
<text sub="clublinks" start="82.64" dur="4.04"> Shaqaaluhu way weyddiiyeen sababta oo ah xusuustooda ayaa laga tirtiray mahadnaq Amnestic / kiimikooyin gaar ah </text>
<text sub="clublinks" start="86.68" dur="3.66"> Aasaasku u adeegsaday awood uu ku masaxo xusuusta aadanaha. </text>
<text sub="clublinks" start="90.34" dur="4.6"> Mu'asasada ayaa u isticmaashay kaliya shaqaalaha ama dadka rayidka ah ee xaqiijiyay xiriirka </text>
<text sub="clublinks" start="94.94" dur="3.609"> SCP, dhakhtarkuna wuu ogaa inay gacantooda ku hayaan </text>
<text sub="clublinks" start="98.549" dur="1.281"> Jaranjarada. </text>
<text sub="clublinks" start="99.83" dur="5.12"> Jaranjarada waxbaa laga baqi jiray, oo waxay ahayd aasaaska SCP </text>
<text sub="clublinks" start="104.95" dur="4.58"> Soo ogow wixii ka horreeyay ee sababay in qof walba la waayo. </text>
<text sub="clublinks" start="109.53" dur="6.4"> Tani waa sheekada SCP-087 oo sidoo kale loo yaqaan Jaranjarada Infinite iyo Saddex </text>
<text sub="clublinks" start="115.93" dur="3.26"> waddooyinka halaagsani hoos ugu mool dheer. </text>
<text sub="clublinks" start="119.19" dur="5.209"> Dhakhtarku wuxuu aad uga jeclaa inuu bilaabo sahaminta jaranjarada iyo cillado xumadiisa </text>
<text sub="clublinks" start="124.399" dur="1"> Guryaha. </text>
<text sub="clublinks" start="125.399" dur="4.11"> Si kastaba ha noqotee, kama dhex geli doontid cilmi-baarayaasha waaweyn ee aasaaska </text>
<text sub="clublinks" start="129.509" dur="4.381"> iyada oo aan geesinimo lahayn, iyo in yar oo waalan. </text>
<text sub="clublinks" start="133.89" dur="4.61"> Sidii caadiga ahayd, markii wareega lagu ilaaliyo jaranjarada, dhakhtar wanaagsan ayaa weydiiyey </text>
<text sub="clublinks" start="138.5" dur="2.79"> xulashada maadooyinka imtixaanka Class D. </text>
<text sub="clublinks" start="141.29" dur="4.559"> Kuwa aan aqoon, Class D waa hab edeb leh oo aasaaska loo yiraahdo "tijaabo </text>
<text sub="clublinks" start="145.849" dur="1"> Doofaarrada Guinea. " </text>
<text sub="clublinks" start="146.849" dur="5.991"> Dhakhtarka ayaa loo diray sadex maxbuus oo ka tirsan Class D si ay u baaraan SCP-087 </text>
<text sub="clublinks" start="152.84" dur="5.81"> Marka hore. D-8432. wuxuu jiray 43 sano, sida ku cad dukumiinti rasmi ah oo ku saabsan dhacdada </text>
<text sub="clublinks" start="158.65" dur="4.869"> nin dherer iyo muuqaal celcelis ahaan iyo muuqaal caadi ah oo nafsiyeed leh. </text>
<text sub="clublinks" start="163.519" dur="4.72"> Ninkani wuxuu u shaqeyn jiray aasaaska xafiis rasmi ah, laakiin badiyaa wuu helay </text>
<text sub="clublinks" start="168.239" dur="6.311"> nabaad-guurka heerka D ah oo ay sabab u tahay qaladka halista ah ee SCP-682 </text>
<text sub="clublinks" start="174.55" dur="2.11"> u horseeday dhimashada wakiilo dhowr ah. </text>
<text sub="clublinks" start="176.66" dur="2.969"> Waxay umuuqataa in hada la joogo. </text>
<text sub="clublinks" start="179.629" dur="4.791"> Dhaqtarka ayaa u sharaxay tilmaamaha uu siiyay: Baadh jaranjarada, hel macluumaad badan intii suurtogal ah, naga caawi inaan si sax ah u ogaanno </text>
<text sub="clublinks" start="184.42" dur="2.08"> waxa aan ka qabaneyno halkan. </text>
<text sub="clublinks" start="186.5" dur="3.57"> Haddii aad soo noqotid adigoo nool, xitaa waxay kuu noqon kartaa dallacsiin adiga. </text>
<text sub="clublinks" start="190.07" dur="5.57"> Iyo ballantaas, D-8432 waxay heshay laambad daadad ah oo 75-watt ah oo leh batteri </text>
<text sub="clublinks" start="195.64" dur="5.159"> muddo 24 saacadood ah, sameecadaha dhagaha lagu duubo iyo kaamirada gacanta lagu duubo oo leh </text>
<text sub="clublinks" start="200.8" dur="5.22"> tabinta tooska ah, iyo sameecadaha dhagaha ee lagula xiriiro Dr.Bright </text>
<text sub="clublinks" start="206.02" dur="5.94"> D-8432 waxaa lagu tuuray albaabka marinka 3B, jaranjarada. </text>
<text sub="clublinks" start="211.96" dur="5.24"> Sida ku xusan feylasha aan kala sooc lahayn, Aasaasku wuxuu sharxayaa jaranjarada, SCP-087 waa </text>
<text sub="clublinks" start="217.209" dur="2.361"> jaranjarada unlit </text>
<text sub="clublinks" start="219.57" dur="5.33"> Jaranjarada ayaa ku degaysa xagal 38 darajo ah 13 tallaabo ka hor intaanay gaarin sagxadda wareega </text>
<text sub="clublinks" start="224.9" dur="2.82"> qiyaastii 3 mitir dhexroor. </text>
<text sub="clublinks" start="227.72" dur="3.799"> Jihada uu ku abtirsado wuxuu ku wareegaa 180 digrii madal kasta. </text>
<text sub="clublinks" start="231.519" dur="6.701"> Dabeecadda SCP-087 waxay xaddideysaa muuqaalka 1.5 dabaq. </text>
<text sub="clublinks" start="238.22" dur="4.609"> Laakiin maskaxda D-8432, "ma shidna" runti uma muuqan eray sax ah. </text>
<text sub="clublinks" start="242.829" dur="3.171"> Waxaa loo doortay "nuugista mugdiga" </text>
<text sub="clublinks" start="246" dur="5.939"> In kasta oo laambad awood leh oo 75-watt ah, D-8432 waxay awood u yeelatay inay qayb uun iftiimiso </text>
<text sub="clublinks" start="251.939" dur="4.501"> madal uu ku taagnaa oo uu ku guulaystay inuu iftiimiyo oo kaliya 9 talaabo oo ah </text>
<text sub="clublinks" start="256.44" dur="2.97"> 13 tallaabo oo loo maro barnaamijka xiga. </text>
<text sub="clublinks" start="259.41" dur="4.73"> Markuu D-8432 daawaday sida yar ee laambaddu u ifayso, waxaa la faray inuu iftiimo </text>
<text sub="clublinks" start="264.14" dur="2.97"> albaabka marinka 3B </text>
<text sub="clublinks" start="267.11" dur="6.48"> Markii uu ka ifayay hoolka, waxay umuuqatay inuu aad uga iftiimay SCP-087. </text>
<text sub="clublinks" start="273.59" dur="4.86"> Horeba, bilowgii waxqabadka aan wanaagsaneyn wuxuu ahaa mid iska cad: Meel kasta oo kale mugdi ayaa ka jira </text>
<text sub="clublinks" start="278.45" dur="1.75"> kaliya maqnaanshaha iftiinka. </text>
<text sub="clublinks" start="280.2" dur="3.16"> SCP-087, mugdigu wuxuu cunaa iftiinka. </text>
<text sub="clublinks" start="283.36" dur="4.77"> Waxay umuuqatay, arrin madow oo noolaan karta qadar cayiman iftiinka halka </text>
<text sub="clublinks" start="288.13" dur="1.95"> inta soo hartay uun ma soo muuqan doonaan. </text>
<text sub="clublinks" start="290.08" dur="3.2"> D-8432 ayaa liqay si adag burooyinka cunahiisa. </text>
<text sub="clublinks" start="293.28" dur="4.51"> Albaabka marinka 3B ayaa laga xiray gadaashiisa waxaana laga codsaday inuu hoos u dhaco. </text>
<text sub="clublinks" start="297.79" dur="5"> Badbaadadu waxay muujisay in dallacsiintu aysan u badnayn, laakiin maahan inuu dookh helay. </text>
<text sub="clublinks" start="302.79" dur="5.54"> Haddii uu isku dayo inuu ka baxsado SCP-087 ka hor inta aan la oggolaan, waxaa lagu toogan lahaa isla goobta </text>
<text sub="clublinks" start="308.33" dur="1.49"> wakiilada SCP Foundation. </text>
<text sub="clublinks" start="309.82" dur="4.03"> Markaa wuxuu raacay tilmaamaha dhakhtar meeqaam sare ah wuxuuna bilaabay inuu soo dego </text>
<text sub="clublinks" start="313.85" dur="1.22"> madal kale. </text>
<text sub="clublinks" start="315.07" dur="5.09"> Waxba kama jirin waxyaabaha jireed ee jaranjarada laftoodu wax aan caadi ahayn - saldhigga iyo derbiyada </text>
<text sub="clublinks" start="320.16" dur="3.44"> waxay ahaayeen kuwo cad, oo la taaban karo, oo leh bir bir ah. </text>
<text sub="clublinks" start="323.6" dur="4.99"> Hal shay oo umuuqday midka kaliya ee ilaa hada ahaa astaamaha cajiibka ah ee iftiinka. </text>
<text sub="clublinks" start="328.59" dur="6.4"> Taasi waxay ahayd ilaa uu ka gaadhay barxaddii labaad oo uu maqlay qaylo jilicsan </text>
<text sub="clublinks" start="334.99" dur="1.16"> Ilmaha ooyaya .. </text>
<text sub="clublinks" start="336.15" dur="4.99"> Waxay ahayd weerar argagax leh, ama xitaa xanuun xagga hoose ah. </text>
<text sub="clublinks" start="341.14" dur="4.38"> Wuxuu weydiiyay sababta uu ujoogsaday, wuxuuna sharaxay dhawaqa buuq uu maqlay. </text>
<text sub="clublinks" start="345.52" dur="4.64"> Waxay u egtahay inay ka soo dhaceyso jaranjarada, laga yaabee inay 200 mitir ka hooseyso. </text>
<text sub="clublinks" start="350.16" dur="4.97"> Wuxuu garan karaa oo keliya ereyada "fadlan," "caawimaad," iyo "hoos halkan." </text>
<text sub="clublinks" start="355.13" dur="1"> mugdi. </text>
<text sub="clublinks" start="356.13" dur="3.65"> Laakiin kooxda waxba kama ay maqal jaranjarada dibedda, sidaa darteed wuxuu ka codsaday inay soo degaan </text>
<text sub="clublinks" start="359.78" dur="1.04"> siiyey. </text>
<text sub="clublinks" start="360.82" dur="4.92"> Madal kale oo hoos u dhacday iyaguna waxay bilaabeen inay maqlaan iyaguna, iyagoo baqaya oohinta </text>
<text sub="clublinks" start="365.74" dur="1"> cunug </text>
<text sub="clublinks" start="366.74" dur="2.35"> "Fadlan," "caawin," iyo "hoos halkan." </text>
<text sub="clublinks" start="369.09" dur="5.88"> D-8432 waxaa la amray in la sii wado oo la joojiyo oo keliya markay ogaato isbeddelada ku dhaca muuqaalka muuqaalka </text>
<text sub="clublinks" start="374.97" dur="2.18"> ama dhawaqa uu maqlay. </text>
<text sub="clublinks" start="377.15" dur="4.98"> D-8432, isaga oo og in noloshiisu khadka ku jirto, waa inuu sii wadaa oo uu labaatan jirsado </text>
<text sub="clublinks" start="382.13" dur="4.06"> dabaqyada ka hooseeya jaranjarada ka hor intaanu istaagin inuu dhaho ma gaadhin ilmaha </text>
<text sub="clublinks" start="386.19" dur="1"> ugu dhow dhammaan. </text>
<text sub="clublinks" start="387.19" dur="3.471"> Weli waxay ka dhawaajisay meel fog, sidii markii ugu horreysay ee uu maqlay. </text>
<text sub="clublinks" start="390.661" dur="3.869"> Waxaa loo sheegay in indha indheyntiisii ​​la duubay, laguna qasbay inuu horay u socdo. </text>
<text sub="clublinks" start="394.53" dur="5.94"> Nus saac gudahood, D-8432 wuxuu gaadhay 50 dabaq, welina ma jiro </text>
<text sub="clublinks" start="400.47" dur="1.18"> hoose. </text>
<text sub="clublinks" start="401.65" dur="3.97"> Mugga oohinta ilmaha ayaa sidiisii ​​ahaatay markasta sidii </text>
<text sub="clublinks" start="405.62" dur="4.3"> laga soo raray D-8432 isla xawaare la mid ah kii soo degay. </text>
<text sub="clublinks" start="409.92" dur="4.27"> Xilligan, D-8432 wuxuu ku dhawaaqay inuu dareemay amni darro. </text>
<text sub="clublinks" start="414.19" dur="3.25"> Dhaqtarka ayaa sheegay inay tahay wax dabiici ah marka loo eego duruufaha jira </text>
<text sub="clublinks" start="417.44" dur="4.93"> Wuxuu arkay wax yar markasta, sida fiidiyoowga tooska ah, </text>
<text sub="clublinks" start="422.37" dur="5.06"> iyo wax ku saabsan dabeecada runta ah ee jaranjarooyinka oo aan wali gaarin dhawaqa oohin, </text>
<text sub="clublinks" start="427.43" dur="1.33"> waxay ahayd mid aan la inkiri karin cabsi. </text>
<text sub="clublinks" start="428.76" dur="3.92"> Laakiin arrimihii runtii waxay noqdeen kuwii ugu xumaa. </text>
<text sub="clublinks" start="432.68" dur="4.18"> Markii ay D-8432 tallaabo hore u qaadday tallaabada xigta, wey qabowday. </text>
<text sub="clublinks" start="436.86" dur="4.6"> Hoosta waxaa ku yaal madasha wax aan weli iftiimin </text>
<text sub="clublinks" start="441.46" dur="1"> Guluubka nalka 75 watt. </text>
<text sub="clublinks" start="442.46" dur="1.39"> Waxay ahayd weji. </text>
<text sub="clublinks" start="443.85" dur="5.53"> Qaabka iyo cabirka aadanaha ee yaabka leh, laakiin wuxuu lahaa xoogaa kala duwanaansho cabsi badan, maqaarka cawl, </text>
<text sub="clublinks" start="449.38" dur="3.66"> kaasoo aan lahayn afka, dulalka sanka iyo ardayda. </text>
<text sub="clublinks" start="453.04" dur="5.38"> Iyo si cad, D-8432 wuxuu dareemay inuu isha ku hayo sheygan. </text>
<text sub="clublinks" start="458.42" dur="2.98"> Wuu dhaqaaqi kari waayey, waxaa ku xayirmay indha-indheynta waxyaabahaas. </text>
<text sub="clublinks" start="461.4" dur="5.98"> Tan dhexdeeda, wajiga isla markiiba horay ayuu u jiiday wuxuuna qiyaastii 1 tallaabo u jiraa wajiga D-8432 </text>
<text sub="clublinks" start="467.38" dur="1.86"> indhihiisu waxay fiirinayaan indhihiisa. </text>
<text sub="clublinks" start="469.24" dur="5.84"> D-8432 wuu qayliyay wuuna orday, wuxuu hoos udhacay 50 dabaq 18 daqiiqo oo layaableh, </text>
<text sub="clublinks" start="475.08" dur="2.25"> ka hor intaanu isku tuurin marinka 3B. </text>
<text sub="clublinks" start="477.33" dur="4.89"> Halkaasuu ku burburay cabsi iyo daal badan wixii uu arkay. </text>
<text sub="clublinks" start="482.22" dur="5.68"> Kadib markii la baaray duritaanka wajiga qalaad, waxaa loogu talagalay inuu noqdo SCP-087-1 </text>
<text sub="clublinks" start="487.9" dur="3.62"> Xiiso badan, waa waqtigii tijaabo labaad. </text>
<text sub="clublinks" start="491.57" dur="2.39"> Dhakhtarku wuxuu u baahday inuu waxbadan ogaado. </text>
<text sub="clublinks" start="493.96" dur="6.01"> Mawduuca labaad ee imtixaanka wuxuu ahaa D-9035, waa nin 28 jir ah oo taariikh ku leh nacayb xad dhaaf ah </text>
<text sub="clublinks" start="499.97" dur="1"> xagga haweenka. </text>
<text sub="clublinks" start="500.97" dur="5.15"> Wuxuu helay waxyaabo la mid ah maadadii hore, wuu xoog badan yahay markan </text>
<text sub="clublinks" start="506.12" dur="1.4"> 100 watt nalka </text>
<text sub="clublinks" start="507.52" dur="5.84"> Waxa kale oo uu helay 100 nal yar oo laydh ah oo leh dhabarka dheg dheg leh oo batari ku xidhan yahay </text>
<text sub="clublinks" start="513.36" dur="5.059"> 3 toddobaad, iyada oo taasi ay ahayd inay si joogto ah u iftiimiyaan SCP-087 </text>
<text sub="clublinks" start="518.419" dur="4.391"> Nasiib darrose, awoodda dheeriga ah ee guluubkaagu weli wax dheeraad ah kama sii daadin karto </text>
<text sub="clublinks" start="522.81" dur="1.24"> tallaabada sagaalaad. </text>
<text sub="clublinks" start="524.05" dur="2.96"> SCP-087 ma ogolaaneyso. </text>
<text sub="clublinks" start="527.01" dur="3.91"> Isagu wax fikrad ah kama uusan hayn argagaxa ay fiirinayaan, wuxuu aaday dhakhtarka </text>
<text sub="clublinks" start="530.92" dur="4.7"> amar, oo waxay bilaabeen inay ku dhejiyaan LED-yada gidaarka goob kasta. </text>
<text sub="clublinks" start="535.62" dur="4.15"> Laydhka wuxuu had iyo jeer iftiimiyaa kaliya sagxadda, laakiin nalka ma ifayo sida 1 tallaabo on </text>
<text sub="clublinks" start="539.77" dur="1.25"> xisbi kasta. </text>
<text sub="clublinks" start="541.02" dur="4.44"> Jaranjarada qudhoodu waxay ku sii nagaan doonaan gudcurka weligiis ah </text>
<text sub="clublinks" start="545.46" dur="7.38"> Dabaqa labaad kadib, D-9035 wuxuu soo sheegayaa isla qayladii markii uu maqlay D-8432 oo uusan nasan. </text>
<text sub="clublinks" start="552.84" dur="5.92"> Sidii hore oo kale, markii ay soo dhacdo D-9035, dhawaqa jabaqku ma kordho, </text>
<text sub="clublinks" start="558.76" dur="4.94"> sida haddii uu tallaabo ka qaaday, maxaa isha ciilku ka qaadi lahaa oo hoos u sii haynaysaa </text>
<text sub="clublinks" start="563.7" dur="3.29"> 200 mitir ka hooseysa. </text>
<text sub="clublinks" start="566.99" dur="5.4"> Hase yeeshe, waxaa la baray inuu soo dego oo uu dhigo Laydhka markii uu curyaannimo la'aa </text>
<text sub="clublinks" start="572.39" dur="1"> koray. </text>
<text sub="clublinks" start="573.39" dur="4.59"> Markuu dhaafo dabaqa 51-aad, wuxuu ogaadaa waxyeellada darbiga iyo jaranjarooyinka </text>
<text sub="clublinks" start="577.98" dur="3.71"> Waxay u egtahay xoog xad-dhaaf ah oo ku garaacaya qaybo. </text>
<text sub="clublinks" start="581.69" dur="6.08"> Markii uu ka soo degay jaranjarooyinka jajaban, wuxuu dareemay cabsidiisa, welwelkiisa, iyo paranoia inuu korayo. </text>
<text sub="clublinks" start="587.77" dur="5.16"> Dhaqtarku wuxuu ogaaday xaqiiqda ah in SCP-087 ay sida muuqata walaac ku abuurayso dadka deggan </text>
<text sub="clublinks" start="592.93" dur="5.87"> iyo argagax, kahor intaan lala kulmin SCP-087-1 </text>
<text sub="clublinks" start="598.8" dur="7.39"> Markii ay D-9035 gaartey dabaqa 89aad - 350 mitir buuxa oo ka hooseeya barxaddii hore - way joogsatay </text>
<text sub="clublinks" start="606.19" dur="5.09"> raadkiisa, oo wuxuu arkay shay ka dhudhunsanaaya barxadda hoose. </text>
<text sub="clublinks" start="611.28" dur="5.68"> Isla, weji cirro leh, oo leh indho cad oo dhintay. </text>
<text sub="clublinks" start="616.96" dur="4.41"> Waxaa lagu dhiirigaliyay inuu isdajiyo oo wuxuu isku dayay inuu helo talaal wajiga kafiican, laakiin wuu bilaabay </text>
<text sub="clublinks" start="621.37" dur="3.32"> dushiisa iyo D-9035 wuxuu u orday naftiisa. </text>
<text sub="clublinks" start="624.69" dur="4.02"> Jaranjarada wuxuu ku fuulay xawaare aan caadi aheyn, xitaa isagoo daal la daala dhacaya </text>
<text sub="clublinks" start="628.71" dur="3.44"> oo aan dhaqdhaqaaq lahayn 14 daqiiqo kalabadh. </text>
<text sub="clublinks" start="632.15" dur="5.53"> Markii D-9035 ay heshay awood ay ku kacdo oo ay ugu laabato Corridor 3B </text>
<text sub="clublinks" start="637.68" dur="2.01"> waxayna ku dhacday xaalad catatonic ah. </text>
<text sub="clublinks" start="639.69" dur="5.95"> Ilaa maanta, isagu wax kama falceliyo, wax jawaab ah kama bixin oo wuxuu fiirinayaa oo keliya masaafada </text>
<text sub="clublinks" start="645.64" dur="1.72"> leh hadal xun. </text>
<text sub="clublinks" start="647.36" dur="2.84"> Waxay u egtahay sidii in marinku wali yaalo. </text>
<text sub="clublinks" start="650.2" dur="4.94"> Dhakhtarku wuxuu rabay inuu sameeyo hal baaritaan oo dheeri ah kahor inta uusan amrin SCP-087 inuu xirnaado weligiis </text>
<text sub="clublinks" start="655.14" dur="3.79"> iftiin, oo taasuna waxay ahayd midda ugu cabsida badan. </text>
<text sub="clublinks" start="658.93" dur="5.751"> Mawduuca ugu dambeeya wuxuu ahaa D-9884, haweeney 23 jir ah oo niyadjab joogto ah qabta </text>
<text sub="clublinks" start="664.681" dur="1.599"> adeegsiga awood xad dhaaf ah. </text>
<text sub="clublinks" start="666.28" dur="5.64"> Dhakhtarku wuxuu rajeeyay in D-D-9884 uu u safri doono sida ugu qotada dheer, markaa wuu siiyay. </text>
<text sub="clublinks" start="671.92" dur="6.52"> ku kaydso boorsada 3.75 litir oo biyo ah, 15 baararka nafaqada, iyo 1 kulul </text>
<text sub="clublinks" start="678.44" dur="1"> buste. </text>
<text sub="clublinks" start="679.44" dur="3.81"> Dhanka Aasaaska, waxay ahayd wado fog. </text>
<text sub="clublinks" start="683.25" dur="3.94"> Laakiin midkoodna ma garaneynin sida ay u qumman yihiin. </text>
<text sub="clublinks" start="687.19" dur="6.6"> Markuu D-9884 soo galay SCP-087, dhammaan nalalka sahankii hore waa la waayey. </text>
<text sub="clublinks" start="693.79" dur="3.02"> Si kastaba ha noqotee, waxaa la faray inuu gaaro moolka. </text>
<text sub="clublinks" start="696.81" dur="4.32"> Waxay maqashay oohinta ilmo dahsoon - hadday ilmo tahayba - iyo </text>
<text sub="clublinks" start="701.13" dur="1.5"> waxaa markale lagu amray inay gasho moolka hoose. </text>
<text sub="clublinks" start="702.63" dur="7.32"> Dabaqa 496-aad, waxay umuuqatay in D-9884 uu galay argagax dilaa ah </text>
<text sub="clublinks" start="709.95" dur="3.11"> mar kale ayaa lagu amray inay si qoto dheer u sii socoto. </text>
<text sub="clublinks" start="713.06" dur="4.49"> Waqti kasta iyo kadib, wuxuu rajeynayey inuu si dhow u eego wejiga SCP-087-1. </text>
<text sub="clublinks" start="717.55" dur="6.5"> Iyo markii D-9884 uu ugu dambeyntii burburay oo uu fuulay jaranjarada, wuu sameeyay. </text>
<text sub="clublinks" start="724.05" dur="5.67"> Wejigeeda ayaa u muuqday, laakiin markan dhererkeeda ayay ka dambaysay iyada oo toos u eegaysa </text>
<text sub="clublinks" start="729.72" dur="4.75"> kamaradaha indhaha madhan, ka yaabisay xitaa halyeeyga ka sarraysa. </text>
<text sub="clublinks" start="734.47" dur="4.88"> Wejiga soo muuqday wuxuu sababay D-9884 inuu argagaxo, oo baxsado, laakiin halkii aad jaranjarada ka bixi lahayd </text>
<text sub="clublinks" start="739.35" dur="4.41"> jaranjarada si ay u badbaado, waxay hoos ugu sii dhaadhacday jaranjarada iyada oo isku dayaysa inay baxsato. </text>
<text sub="clublinks" start="743.76" dur="5.48"> Qoto dheer oo qoto dheer, oo qoto dheer ilaa fiidiyowga laga joojiyay. </text>
<text sub="clublinks" start="749.24" dur="2.35"> D-9884 dib uma soo noqon. </text>
<text sub="clublinks" start="751.59" dur="5.1"> Imtixaanada kadib, SCP waxaa lagu qiimeeyay Euclid - malaha waxay ahayd </text>
<text sub="clublinks" start="756.69" dur="3.36"> khatar ah, laakiin way sahlanayd in la tago. </text>
<text sub="clublinks" start="760.05" dur="4.45"> Albaabka marinka 3B waxaa lagu beddelay albaab ka sameysan bir xoojin leh koronto </text>
<text sub="clublinks" start="764.5" dur="1"> farsamo. </text>
<text sub="clublinks" start="765.5" dur="4.24"> Waa la qariyey, sida qolka dayactirka oo la mid ah dhismaha intiisa kale. </text>
<text sub="clublinks" start="769.74" dur="4.14"> Qufulku ma sii deyn doono ilaa volt-ka la xoojinayo isla markaana aan isla waqtiga la qaadayn </text>
<text sub="clublinks" start="773.88" dur="2.31"> furaha wuxuu u rogay dhinaca woqooyi. </text>
<text sub="clublinks" start="776.19" dur="4.04"> Ka dib gudaha albaabka waxaa lagu dhejiyay dhowr inji oo faashad xumbada warshadaha ah, </text>
<text sub="clublinks" start="780.23" dur="2.83"> shaqaalaha dhismaha waligood ma aysan soo sheegin wax dhawaaq ah oo qariib ah. </text>
<text sub="clublinks" start="783.06" dur="5.25"> Sida kuwa ku lumay dabaqyada leexashada leh ee aan dhammaadka lahayn iyo barxadda SCP 087 </text>
<text sub="clublinks" start="788.31" dur="2.66"> waligeen ma ogaan karno. </text>
<text sub="clublinks" start="790.97" dur="3.75"> Laakiin waxaan kaliya u qaadan karaa inaysan fiicnaan doonin. </text>